Ungasula kanjani i-Cache ku-iPhone ne-iPad - iSafari, i-Apps - Amagajethi
Ngabe ubhekene nezinkinga zokusebenza nge-iPhone yakho? Noma ubheka ukuthi ungayisula kanjani i-cache?Mhlawumbe kuhamba kancane noma kusale kancane. Ungahle uzame ukucushwa nokugcinwa, kepha kwesinye isikhathi isilondolozi sidinga ukususwa. Akukho ukuhlanza isilondolozi okujwayelekile okutholakalela i-iOS. Ngaphandle kokuthi uyikhokhele. Ngakho-ke, kuba inselele ukusula inqolobane ku-iPhone yakho.
Ungakhathazeki! Kukhona igebe elikuvumela ukuthi usule inqolobane yezinhlelo zokusebenza ngawodwana. Kungakwenza ukwazi ukusheshisa i-iPhone yakho. Kulesi sihloko, uzofunda ngezindlela ezahlukahlukene zokusula inqolobane ye-iPhone ethinta kakhulu ijubane layo.
Ufuna ukuthenga i-iPhone? Hlola I-iPhone 12 vs Mini vs Pro ne-Pro Max Ukuqhathanisa.
Izinyathelo zokusula i-Cache kusiphequluli seSafari:
I-Safari i-iPhones yesiphequluli esizenzakalelayo eza nayo. Ungahle ungazi, kodwa ukuqoqwa kwedatha, umlando, kanye nesilondolozi kungaba nomthelela ekusebenzeni kwefoni yakho. Kungahle kube nezimo lapho isiphequluli sakho sishiya ngemuva. Kwesinye isikhathi isayithi ngeke lilayishe kahle. Konke lokho kuncike kunqolobane.
Iya kuzilungiselelo ze-iPhone yakho bese uthola i-Safari.
Lapho uzothola inketho ethi 'Sula umlando kanye nedatha yewebhusayithi'. Yisebenzise.
Lokho kuzosula imininingwane eminingi yesiphequluli.
Manje buyela ku-Safari kuzilungiselelo bese uya kokuthi 'Okuthuthukile.'
Lapho uzothola imininingwane yewebhusayithi. Ifaka izingodo futhi iqophe amakhukhi nedatha ethile maqondana namawebhusayithi ahlukile.
Manje ungachofoza ku-'susa yonke idatha 'ukusula i-cache ngokuphelele. Ngenye indlela, ungakhetha amanye amasayithi bese uswayipha ngakwesokunxele ukuze ususe i-cache yawo kusiphequluli.
Khumbula, ukusula inqolobane nomlando ngeke kuthinte ukugcwaliswa okuzenzakalelayo nenye idatha elondoloziwe. Ngaphandle kokuthi ukhethe ukuzisula. Ngakho-ke, uphephile.
Ukusula inqolobane yezinhlelo zokusebenza ezingazodwana:
Uma kukhulunywa iqiniso, ayikho indlela ephelele yokusula idatha noma i-cache yohlelo lokusebenza ngalunye ku-iPhone. Ungasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni noma isoftware ukusheshisa i-iPhone yakho. Kodwa-ke, lokho kukuwe ngokuphelele. Njengomsebenzisi we-premium we-Apple, kuza nokucabanga ukuthi kuzodingeka usebenzise imali ethile ku-iPhone ukuthola izinhlelo zokusebenza zesondlo.
Nazi ezinye izinyathelo ongazisebenzisa ukusula i-cache:
Khipha uphinde ufake uhlelo lokusebenza ofuna ukusula i-cache yalo. Lokhu kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokususa idatha.
Hlola izilungiselelo ezingazodwana zohlelo lokusebenza ngalunye. Abanye beza nezinketho ezicacile ze-cache.
Nendlela Khipha Izinhlelo ku-iPhone?
Kuzodingeka ukhiphe uhlelo lokusebenza ngawodwana. Ngokujabulisayo, akunzima kangako. Landela lezi zinyathelo:
Iya kuzilungiselelo ku-iPhone yakho bese ufaka Okujwayelekile.
Lapho, uzothola inketho yesitoreji se-iPhone.
Njengoba uyifaka, uzothola izinhlu zohlelo lokusebenza eziningi.
Khetha uhlelo lokusebenza ofuna ukulususa bese uqhafaza ku-‘appload app. ’Izosusa uhlelo lokusebenza
Uma ungafuni ukususa ngesandla uhlelo lokusebenza ngalunye kepha ufuna ukusheshisa ukukhipha zonke, kunenketho yokukhipha izinhlelo zokusebenza ezingasetshenziswanga. Ku-iPhone Storage, uzothola ‘Ukulayisha izinhlelo zokusebenza ezingasetshenziswanga.’ Izosusa noma yiluphi uhlelo lokusebenza ongalusebenzisanga isikhathi eside. Kodwa qaphela. Kungagcina kususe izinhlelo zokusebenza ozithola zibalulekile kodwa ongazisebenzisi isikhashana. Ungayenza isebenze ngokuchofoza ku-'Vumela. '
Setha kabusha ifoni yakho:
Ungase ucabange ngakho njengenketho yobuhlanya. Kodwa-ke, uma ufuna ngokusuka enqolobaneni ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane, ukusetha kabusha ifoni yakho kuyindlela enhle. Ukuphela kokufanele ukwenze ukudala isipele ku-iCloud noma i-iTunes ngaphambi kokuthi usethe kabusha ifoni yakho.
Bese ukhetha Okujwayelekile
Lapho uzothola inketho yokusetha kabusha.
Chofoza kuso bese ukhetha ukusula konke okuqukethwe nezilungiselelo.
Ngenye indlela, ungasebenzisa i-iCloud noma i-iTunes. Khumbula, kuzokucela ukuthi usebenzise i-Apple ID ne-password yakho. Akuyona indlela eqinisekile yomlilo kepha isebenza kakhulu ekususeni idatha engasebenzi kanye nenqolobane efonini yakho.
Uzothola umfutho obalulekile ekusebenzeni kwefoni yakho.
I-Apple ayikwenzi kube lula kuwe ukusula inqolobane. Kodwa-ke, ukusula i-cache ye-Safari ngokuvamile kwenza iqhinga lokusheshisa ifoni yakho. Ngokwengeziwe, uma une-Google Chrome noma esinye isiphequluli, ungahle uthande ukusula i-cache yazo. Qiniseka ukuthi alukho uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu oluthatha isistimu yakho.
Ngezinye izindaba ezihlobene nejubane, ungasebenzisa isitoreji se-iCloud ukugcina izithombe zakho namavidiyo. Isikhala esiningi ngokuvamile sithambekele ekwenzeni ukuthi idivayisi isebenze kangcono futhi kahle. Njengomthetho ojwayelekile wesithupha, kuwumkhuba omuhle ukusula inqolobane yakho kanye ngesonto noma ngenyanga. Kungaba nemininingwane eminingi engabalulekile kanye nedatha.
Sethemba ukuthi lezi zinyathelo zikusiza ukuxazulula izinkinga zejubane noma zokusalela emuva. Uma kungenjalo, ungathembela kuzinhlelo zokusebenza zokusheshisa ezitholakalela i-iPhone. Njalo khetha ama-premium. Ungasebenzisi izinhlelo zokusebenza zamahhala njengoba lokho kungaba yingozi.